Mpikambana ambony amin’ny governemanta nosamborina tao Trinite & Tobago, masiaka ny adihevitra momba ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Niteraka adihevitra momba ny kolikolim-politika eo amin'ny firenena ilay fisamborana
Voadika ny 26 Septambra 2019 6:03 GMT
Fitetezana karnavaly “mas camp” nataon'i Marlene McDonald nandritra ny nitazonany minisitera tamin'ny taona 2008. Saripikan'ny Trinidad News, CC BY 2.0.
Nosamborina tao Trinite tamin'ny 8 aogositra 2019 noho ny fiampangana kolikoly ny mpikambana ao amin'ny parlemantan'i Trinite sy Tobago Marlene McDonald, izay mitazona ny Minisiteran'ny Fitantanam-Panjakana. Nesorina teo amin'ny toeran'ny filoha lefitry ny antoko mitondra People's National Movement (PNM) ihany koa i McDonald, izay miatrika vesatra fiampangana heloka bevava maro ka anisan'izany ny fanadiovam-bola, firaisana tsikombakomba amin'ny fanaovana hosoka, ary fitondran-tena ratsy ao amin'ny biraom-panjakana.
Tsy vahiny amin-javatra miteraka resabe i McDonald. Tany am-piandohan'ny taona 2016, voaroaka teo amin'ny toerana maha-minisitry ny fonenana sy ny fampandrosoana ny tanandehibe izy taorian'ny fiampangana ho manararaotra ny toerana misy azy. Tamin'izany fotoana izany izy voampanga ho nanome trano ho an'ny vadiny tamin'ny alalan'ny sampan-draharaham-panjakana misahana famponenana, tamin'ny fanomezana asa tao amin'ny fari-piadidiany ho an'ny vadiny tsy ara-dalàna sy ny havany izay manitsakitsaka ny fombafomba minisiterialy, ary tamin'ny fananganana fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana mba ahafahany mahatakatra ny volam-panjakana.
Na eo aza ny [fahavitsin-tsafidy], notendren'ny praiminisitra Keith Rowley hitantana ny minisiteram-panjakana i McDonald tamin'ny 30 Jona 2017, asa izay notazoniny andro iray monja: voaroaka izy taorian'ny fianianany, noho ny tabatabam-bahoaka tamin'ny fanatrehan'ny “mpitarika ny fiaraha-monina” iray (fomba fiteny malaza ao an-toerana anondroana mpitarika andian-jiolahy) niara-naka sary tamin'i McDonald tao amin'ny Lapan'ny Filoham-pirenena.
Na izany aza dia nantsoina indray i McDonald: nanomboka niasa tao amin'ny Ministeran'ny Fitantanam-panjakana izy tamin'ny Aprily 2018:
FANTOKA: efa nitana toerana ho minisitra intelo nandritra ny fitantanam-panjakan'i Keith Rowley, roa andro ny fohy indrindra, ilay depioten'i Port of Spain Atsimo Marlene McDonald voaroaka. Indro ny jery amin'ny fandaharam-potoana minisiterialy tamin'ny volana septambra 2015
Olona efatra hafa no nosamborina niaraka tamin'i McDonald: ilay vadiny tsy ara-dalàna Michael Carew, sy ny namany telo (Victor McEachrane, Edgar Zephyrine ary Wayne Anthony). Samy voarohirohy tamin'ny fiampangana voalohany nivoaka tamin'ny taona 2016 avokoa izy efatra ireo. Tamin'izany fotoana izany, tsy nahita «porofo ampy» ny famotopotorana nataon'ny Vaomieran'ny Fahatokisana.
Ny fanadihadiana nataon'ny Biraon'ny Fenitra Matihanina (PSB) vao haingana anefa, na izany aza, nahita porofo ampy tamin'ny fitsingoana dia ny vola avy amin'ny ONG mankany amin'ny kaonty manokan‘ireo olona voarohirohy. Mitovy avokoa ny fiampangana ireo rehetra voampanga ka nosamborina: manao hosoka amin'ny governemanta tamin'ny fahazoana volam-panjakana tamin'ny alàlan'ny Calabar Foundation, sy ny fanadiovam-bola.
Voampanga ho nanao fihetsika tsy mety tao amin'ny biraom-panjakana i McDonald. Napetraka ho TT $ 2 tapitrisa (eo ho eo amin'ny 295000 dôlara amerikana) ny vola solofonja, saingy narary izy talohan'ny niatrehany ny fitsarana ka nampidirina tany amin'ny hopitaly tsy miankina iray. Tamin'ny 12 aogositra 2019, noafahana noho ny fandoavana onitra solofonja avokoa ireo efatra voampanga.
Nanao ahoana ny fihetsiky ny olona tamin'izany ary?
Nametraka an'i McDonald hitodihan'ny olona ao amin'ny firenena ny fisamborana azy, ary niteraka ny adihevitra ankapobeny momba ny kolikoly ao amin'ny firenena. Ao amin'ny Fametrahan-daharana momba ny kolikoly navoakan'ny Transparency International tamin'ny taona 2017 sy ny taona 2018, nahazo ny laharana faha-41 amin'ny firenena 180 i Trinite sy Tobago, fihisarana raha jerena tamin'ny laharana faha-35 tamin'ny taona 2016.
Maneho hevitra ny mpitarika antoko politika vaovao mifototra amin'ny tanora, Nikolai Edwards, fa tsara ny mahita polisy manenjika “trondro vaventy”, enti-manondro ny fomba fijerim-bahoaka fa raha hita ho mandady miakatra ny kolikoly, dia zara raha samborina ireo ahiahiana ho mpanao izany. Tamin'ny fiarahabana ny asan'ny kaomiseran'ny polisy sy ny Biraon'ny Fenitra Matihanina, nampiany fa tsy mendrika fiantrana ry McDonald sy ireo olona fanta-bahoaka hafa mpanao kolikoly.
Nilaza i Kamala Persad-Bissessar mpitarika ao amin'ny fanoherana fa nomena fitsarana ara-drariny i McDonald, raha nanamarika ny praiminisitra fa “tsy misy olona ambonin'ny lalàna” ary tokony hojerena ho fanantenana mamirapiratra ho an'ny firenena ny fisamborana azy.
Tsy mino anefa ny olona satria efa ela dia ela tokoa i McDonald no tao amin'ny asam-panjakana ambony. Misy ireo mpisera media sasantsasany manontany ny kolontsaina politikan'ny fanomezan-dalana (gaboraraka?):
Afa-mandroaka an'i Marlene Mcdonald faninenina amby sivifolo ny praiminisitra ary rehefa tonga ny taona 2021 ka mijery ireo kandidà an'arivony mety amin'ny toerana dia mbola manendry azy indray ho ao amin'ny kabinetra.
Mpisera Twitter iray no nanolo-kevitra fa ny olompirenena mihitsy no olana rehefa tsy miteny manohitra ny kolikoly sy ny fanomezandalana:
Ny fahitana ny olona tia hanaovana an'i Marlene McDonald hanaovana fikarakarana manokana (na eo aza ny vola nangalariny) satria hoe depiote izy INDRINDRA no olana amin'i Trinite sy Tobago. Mpanao gaboraraka.
Na izany aza dia zava-mitranga lehibe teo amin'ny politikan'i Trinite sy Tobago ny fisamborana an'i McDonald amin'ny fanantenan'ny maro fa ity no voalohany amin'ireo hafa hoavy satria mbola maro ireo mpitarika no antsoina hamoaka kaonty. Mpiserasera maro no mijery ny fihazonana ny minisitra ho kely saingy dingana goavana iatrehana ny olan'ny firenena lehibebe kokoa.
Haverina eny amin'ny fitsarana i McDonald sy ny miara-voampanga aminy amin'ny 9 septambra 2019.
20 ora izayHaiti